Bilaogy Armeniana Miresaka Fidarabohan’ny Armavia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Septambra 2017 6:08 GMT
(Marihina fa tamin'ny 4 May 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Nianjera tany amin'ny Ranomasina Mainty ny fiaramanidina Airbus A320 an'ny zotram-piaramanidina Armeniana Armavia ary mpandeha miisa 113 niaraka tamin'ny ekipan'ilay zotra no maty tamin'izany, izay azo lazaina ho fianjeran'ny fiaramanidina ratsy indrindra nisy teo amin'ny tantaran'i Armenia. Ny fanehoan-kevitra voalohany momba ity zava-nitranga ity dia ny filazan'i Christian Garbis fa mafy ho an'ny Armeniana rehetra ity loza ity sy ho an'ny fianakavian'ireo niharam-boina ihany koa ary inoana fa hitaintaina mandritra ny fotoana fohy ny fizahantany Armeniana any ivelan'ny firenena .
Nampitondra teny fampiononana ho an'ny fianakavian'ireo niharam-boina i Zarchka ary niteraka sahotaka sy tebiteby nanerana ny firenena ny zava-nitranga .
Everyone rushed to find out whether there were relatives or friends among the passengers. The telephone in our house wasn’t hung up the whole day. Later we learnt that my doctor’s brother’s young son, 25 years, was in the plane.
Nihazakazaka hahafantatra raha nisy havana na namana teo amin'ireo mpandeha ny rehetra. Tsy nitsahatra naneno ny telefaonina tao an-tranonay ny tontolo andro . Fantatra taty aoriana fa tao anatin'ilay fiaramanidina ny zana-drahalahin'ilay dokoteranay lahy, 25 taona.
Nanamarika i Glendale Chick fa teratany Armeniana ny ankamaroany na dia nilaza aza ireo tatitra fa teratany avy ao amin'ny firenena toy Zeorzia, Armenia ary Rosia ireo niharam-boina, ankoatr'ireo firenena hafa. Nanoratra momba ny famakiana ny lisitry ny mpandeha ihany koa i Harmick raha nanoratra tao amin'ny Blogrel ary nahita olona iray tamin'ny anarany sy ny fanampin'anaran'ny dadatoany. Nilaza izy fa na dia tsy ny dadatoany aza io olona io dia nahatonga ny tao an-trano nahatsapa ny voina manokana.
Nilaza ihany koa i Harmick fa zotram-piaramanidina tsara ny Armavia saingy hanam-pahasahiranana izy noho ny voina. Manahy izy fa mety hampilentika ilay zotram-piaramanidina ilay fianjerana.
Nitatitra ireo fanehoan-kevitra nataon'ny rafi-pitondrana ara-politika ao Armenia i Garen, sady nanamarika fa tokony tao anatin'ilay sidina ny solombavambahoaka parlemantera, saingy nanapa-kevitra ny tsy hankany Sochi izy tamin'ny minitra farany. Notaterina ihany koa fa nirohotra nankany amin'ny faritra atsimon'i Rosia ny minisitry ny fiarovam-pirenena Armeniana mba handray anjara amin'ny fanadihadiana ary nambara ho andro fisaonana ny Zoma sy ny Asabotsy .
Manana ny lisitr'ireo niharam-boina feno ny Blogrel .